Dambidoolloo: Ajjeechaan dargaggoo Amaanu’eel Wandimmuu miidiyaa hawaasaa gubbaatti dheekkamsa kaase – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDambidoolloo: Ajjeechaan dargaggoo Amaanu’eel Wandimmuu miidiyaa hawaasaa gubbaatti dheekkamsa kaase
Guyyaa Kibxataa Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo keessatti dargaggoon maqaan isaa Amaanu’eel Wandimmuu jedhamu humna nageenyaa mootummaatiin ajjeefamuu jiraataan BBCn dubbise ibseera.
(bbc)—Aanga’oonni godinichaa dargaggoon kun humnoota mootummaan ajjeefamuu isaa mirkaneessanii, miseensa garee ‘Abbaa Torbee’ jedhamu waan ta’eef tarkaanfiin irratti fudhatame jedhan.
Kominikeeshiniin Bulchiinsa Magaalaa Dambidoolloo ammoo maqaa ‘Abbaa Torbee’ jedhamuun lubbuu namaa kan baasaa ture irratti tarkaanfiin fudhatameera jechuun, fuula Feesbuukii isaarratti suura dargaggoo kanaa kan morma irratti shugguxiin rarraafame maxxanseera.
”Ajjeechaan shakkamaa yakkaa Amaanu’eel Wandimmuu irratti raawwatame yaaddessaadha”
Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ajjeechaa magaala Dambidoollootti raawwatamee ajjeechaa manni murtii hin ajajiin( extrajudicial) jechuun balaaleffate.
Komishiniin Mirga Namoomaa ibsa marsaalee hawaasaa isaa gubbaatti maxxanseen ”ajjeechaan shakkamaa yakkaa Amaanu’eel Wandimmuu irratti qaamolee nageenyaan” Wiixata kaleessaa raawwatame ”yaadessaadha” jedhe.
”Komishinichi ajjeechaa manni murtii hin ajajiin kamuu jabeessee balaaleffata, duula seera kabachiisuuf godhamu keessatti maloota seeraan alaa fayyadamuun akka hafu irra deebiin dhaama” jedheera.
Ajjeechaa manni murtii hin ajajiin(extrajudicial killing) amantaa namni olaantummaa seeraa irraa qabu laaffisee, bu’aa gama kanaan argames boodatti deebisaa jedha ibsi Komishinichaa.
Aanga’oonni dhimma ajjeechaa kanaa atattamaan qoratanii tarkaanfii barbaachisu akka fudhataniis dhaameera.
Komishiniin Mirga Namoomaa dhimma kana itti dhiyeenyaan hordofaan jiras jedheera.
Jiraataa magaalaa Dambidoolloo ganda 05 akka ta’e kan himeefi sodaa nageenyaaf maqaan isaa ammatti kan hin eeramne, dargaggoo Amanu’eel yeroo humna mootummaatiin ajjeefamu akka arge hima.
“Nama Amaanu’eel jedhamu uummanni baayyee jaallatu, osoo… ummata faana deemaa jiruu waraanni mootummaa ari’ee itti dhukaasee yeroo ajjeesuu argine,” jechuun ibsa jiraataan kun.
Yeroo isaan ummata keessaa ari’anii ajjeesan suuqiitii waa bitachaa akka ture kan dubbatu jiraataan ganda 05 kun, kan qondaaltonni mootummaa nama rukutee osoo fiiguu rukutamee qabame jedhu akka hin argine hima.
Guyyaama kaleessaa namni biraan maqaan isaa Balaay jedhamu rasaasa lamaan rukutamee wallaansaaf rifeerii ergamee jiraachuus quba qabaachuu dubbata jiraataan kun.
Akka jiraataa BBCn dubbise kun jedhutti, dargaggoo ajjeefame kanaan alatti kanneen madaa’an lamaanuu humnuma mootummaatu rukute.
‘Dargaggoon kun shakkamaa miti…’
Itti-gaafatamaan nageenyaa godina Qeellam Wallaggaa Obbo Tasammaa Waariyoo BBCtti akka himanitti, gareen ‘Abbaa Torbee’ jedhamu irra deddeebiin namoota ajjeesuun maqaan isaa ka’u kun, namoota lama rukutee osoo baqachaa jiruu qaama nageenyaan rukutamuu dubbatu.
Akka qondaaltonni mootummaa kunniin jedhanitti namoota guyyaa kaleessaa miseensa garee ‘Abbaa Torbee’ jedhameen namoota rukutaman keessaa tokko abbaa qabeenyaa kan ta’an Obbo Gammachuu Mangashaati.
Guyyaa kaleessaa magaalaa Dambidoolloo keessatti ‘ABO Shanee’ fi qaama mootummaa gidduu lolli akka ture ibsuun, namni rukutamee du’e kun shugguxii ittiin nama nagaafi qaama nageenyaatti ittin dhukaaseefi dheengaddas nama ittiin ajjeese harkatti qabameera jedhu Obbo Tasammaan.
Akka qondaalli mootummaa kun jedhanitti dargaggoon ajjeefjlame kun bosona kan tureefi loltuu ‘ABO Shaneeti.
Obbo Tasammaan dargaggoon kun fayyaadhuma qabamee booda gara addabaabaayii geeffamuun ajjeefame kan jedhu soba ta’uu himuun, erga rukutamee madaa’ee booda addabaabaayiirratti mul’atee lubbuun darbuu ibsan.
Haata’u malee, ibsi gabaabaan fuula feesbuukii Kominikeeshinii Bulchiinsa Magaalaa Dambii Doolloorratti guyyaa kaleessaa bahe, ”guyyaa har’aa ganama nama Obbo Gammachuu Mangashaa jedhamu rukutee osoo miliqaa jiruu ciminaafi qindoomina caasaa nageenyaa magaalattiin milishaa magaalaa keenyaan miilla rukutamee qabamee jira” jedha.
Miidiyaa hawaasummaa gubbaatti shakkamaan to’annoo qaama nageenyaa jala oole murtee seeraa mana murtiin alatti haala akkasiin ajjeefamuun isaa barbaachisummaa manneen murtii gaaffii keessa galcha jechuun ajjeechaa kana balaaleeffataniiru.